လုံခြုံသော VPN server သည်သင်၏လိုင်စင်ဖိုင်ကိုငြင်းပယ်လိုက်သည် - ဘာလုပ်ရမလဲ။ အ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
SecureLine VPN ဆာဗာသည်သင်၏လိုင်စင်ဖိုင်အားငြင်းပယ်လိုက်သည် - ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဒန်နီရယ် Terrasa | 19/09/2021 09:00 | အင်တာနက်ကို
Avast SecureLine VPN လုံခြုံစိတ်ချရသောဆာဗာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုံခြုံရေးအာမခံချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်အားကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်သော encrypted tunnel တစ်ခုအသုံးပြုခြင်းကိုအခြေခံသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာငါတို့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ "SecureLine VPN ဆာဗာသည်သင်၏လိုင်စင်ဖိုင်အားငြင်းပယ်လိုက်သည်".
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ငါတို့ဘာလုပ်သင့်လဲ။ ဒါတွေကဒီ post မှာငါတို့ဖြေရှင်းရမယ့်အဓိကမေးခွန်းတွေပဲ။
1 Avast SecureLine VPN ၏အားသာချက်များ
2 သင်၏ Avast စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါ
3 configuration ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါ
5.2 Firewall ကိုပိတ်ထားပါ
5.3 အခြား VPN ကိုမသုံးထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ
5.4 Avast SecureLine VPN ကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ
Avast SecureLine VPN ၏အားသာချက်များ
ဤအပလီကေးရှင်းမှရရှိသောကျော်ကြားမှုသည်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သော၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည် လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်သည်မရ။ ၎င်းကိုလုံခြုံမှုမရှိသောသို့မဟုတ်အများသုံးကြိုးမဲ့ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အထူးအကြံပြုသည်။
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Avast SecureLine VPN ၏အဓိကအားသာချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစာရင်းပြုစုနိုင်သည်။
အင်တာနက်အကန့်အသတ်မရှိသုံးခွင့်အခြားနေရာတစ်ခု၌ VPN ဆာဗာနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများရှိလျှင်ပင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။
အမည်ဝှက်အာမခံသည်မရ။ ပုံမှန်ဘရော့ဘန်းဆက်သွယ်မှုများတွင်ချိတ်ဆက်သူများ၏ IP လိပ်စာများကိုခြေရာခံနိုင်သော်လည်း VPN ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝအမည်မသိ browsing session တစ်ခုကိုခံစားလိမ့်မည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လုံခြုံရေး ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်ကောင်များသည်အများသုံးကွန်ယက်များကိုသုံးသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို“ ငါး” ဟုသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ login အထောက်အထားများမှစကားဝှက်များအထိအရေးပါသောအချက်အလက်များ။ အသွင်ဝှက်ထားသော VPN ဆက်သွယ်မှုကိုသုံးခြင်းဖြင့်ဤအန္တရာယ်ကိုလက်တွေ့ကျသည်။
ဒီ link ကအပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပြီး install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးမလဲနဲ့အဖြစ်များတဲ့သံသယတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ Avast SecureLine VPN - အမေးအဖြေများ.
သို့သော်“ SecureLine VPN server ကမင်းရဲ့လိုင်စင်ဖိုင်ကိုငြင်းပယ်လိုက်ပြီ” ဟူသောသတင်းကိုတွေ့သောအခါအထက်ပါအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရနိုင်တော့ပါ။ secureline VPN server သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ဖိုင်အားအသုံးပြုသူများအဖြစ်ငြင်းပယ်သောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါအကြောင်းတစ်ခုပေါ့ activation အမှား အတော်လေးမကြာခဏ ကံကောင်းစွာဖြင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
သင်၏ Avast စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါ
SecureLine VPN server ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းမှာပြဿနာများသည်သိသာထင်ရှားပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ စာရင်းပေးသွင်းမှုသက်တမ်းကုန်သွားပြီးသက်တမ်းတိုးရန်လိုသည်မရ။ အခါများစွာတွင်စာရင်းပေးသွင်းမှုသည်တက်ကြွနေသော်လည်း၎င်းသည်အပလီကေးရှင်းအားအသိအမှတ်မပြုပါ။ သို့ဆိုလျှင်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သင့်သောအရာဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ Avast အကောင့်စာရင်းပေးသွင်းမှုကတက်ကြွနေတယ်ဆိုတာကိုငါတို့အတည်ပြုလိမ့်မယ်။
အထက်ပါစစ်ဆေးချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါမက်ဆေ့ချ်ပေါ်လာပါကပြဿနာသည်အခြားအရာဖြစ်နိုင်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းမှုပြီးပါပြီ၊ သို့သော်လျှောက်လွှာကိုအသက်မသွင်းပါမရ။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်လုပ်ရမည့်အရာသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုသင်၏ Avast အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်သို့သွားရန်လုံလောက်ပြီးအီးမေးလ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရွေးချယ်ထားသော ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအီးမေးလ်ကိုထည့်ပါ။ တစ်ခုရရှိလိမ့်မည် activation ကုဒ် ငါတို့ကအပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ၀ င်ရမယ်။
Windows desktop ပေါ်တွင်ပေါ်လာသော Avast SecureLine VPN သင်္ကေတကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ငါတို့သွားမယ် "မီနူး" ပြီးပြီ "လော့ဂ်အင်".
နောက်တစ်ခုငါတို့မိတ်ဆက် အထောက်အထားများ Avast SecureLine VPN ကို ၀ ယ်ရန်သုံးသောအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Avast အကောင့်မှ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံနှိပ်ပါ "လော့ဂ်အင်".
နောက်ဆုံးအဆင့်သည်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည် avast! ငါတို့ activate လုပ်ချင်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ကလစ်လိမ့်မယ် "Activate လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ"မရ။ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါအမှားဆက်ရှိနေပါက၎င်းကိုသုံးရန်လိုအပ်လိမ့်မည် Avast အထောက်အပံ့အဖွဲ့ထံမှအကူအညီ
ဤအမှားကို ဦး တည်စေနိုင်သောအခြားအကြောင်းအရင်းမှာဖွဲ့စည်းမှုချို့ယွင်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပြသနာတစ်ခုရှိသည် ဒိုမိန်းအမည်ဝန်ဆောင်မှု (DNS) စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်းမရ။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းထားသော operating system နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ Windows 10 နှင့် Windows 8 ကိစ္စတွင်လိုက်နာရမည့်နည်းလမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး Windows ကို administrator အဖြစ် ၀ င်ပါ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (သို့) Windows ကိုဖွင့်ရန် Windows start menu ကိုသုံးပါ configuration options.
ဤမီနူးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်သည် "အင်တာနက်ကွန်ယက်"ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် adapter ရွေးချယ်စရာများကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်နေရာ။
En "ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှု"ငါတို့သုံးနေတဲ့ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ option ကိုညာဘက်က mouse ခလုတ်နဲ့ကလစ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ပြတင်းပေါက်ကို ၀ င်ရောက်လိမ့်မည် "ဂုဏ်သတ္တိများ"မရ။ (ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည့် pop-up ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် "လက်ခံ" ကိုနှိပ်ပါ။ )
နောက်တစ်ဆင့်မှာရွေးချယ်စရာစာရင်းမှရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည် "Internet Protocol Version4(TCP / IPv4)" နှင့် "Properties" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီမှာဖြစ်နိုင်ချေတွေဆက်တိုက်ဖွင့်ထားတယ် (Cisco OpenDNS, Google Public DNS, Cloudflare 1.1.1.1 ။ , quad9) ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ကိုသာရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့ပါ ၀ င်သော DNS လိပ်စာများကိုသုံးလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခု။ ဤနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောအပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းရန်လက်ခံရန်နှိပ်ပါ။ (ဤနေရာတွင် "Network Diagnosis" ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းပယ်ရမည်) ။
လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးအပိုင်း၌ start key ကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + R ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ငါတို့ရေးမယ့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် cmd "OK" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပေးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်အောက်ပါကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရမည့် command prompt window ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ipconfig / flushdnsမရ။ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သည်အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းရန် enter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဤနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုသည်အထက်ပါပုံနှင့်ကိုက်ညီသည်။
"SecureLine VPN ဆာဗာသည်သင်၏လိုင်စင်ဖိုင်အားငြင်းပယ်လိုက်သည်"
"SecureLine VPN server ကမင်းရဲ့လိုင်စင်ဖိုင်ကိုငြင်းပယ်လိုက်ပြီ" ဆိုတဲ့ message ကိုရှင်းပြမယ့်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုရှိသေးသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် အရှိဆုံးအနက်အဓိပ္ပာယ် တူ၏။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအကြောင်းများထက် ကျော်လွန်၍ မရှာဖွေသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ပယ်ချခံရသည်။
၎င်းသည်အလွန်တိကျသောအခြေအနေအချို့တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြုသူသည် Avast နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောသဘောတူညီချက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းအချို့ကိုချိုးဖောက်လျှင်မရ။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အလိုအလျောက်မပါ ၀ င်သောအရာဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မည်သူမဆိုဤစည်းကမ်းချက်များကိုကောင်းကောင်းဖတ်လေ့မရှိသောကြောင့်အသေးစိတ်ကိုမကြည့်ဘဲဂရုမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်။
သို့သော်လည်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ Avast ရဲ့အထောက်အပံ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်၊ အခြေအနေကိုဖော်ပြပြီးမင်းအကောင့်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာရမယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ "SecureLine VPN server ကမင်းရဲ့လိုင်စင်ဖိုင်ကိုငြင်းပယ်လိုက်ပြီ" ဆိုတဲ့ error message ဟာအသေးအဖွဲအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အစပျိုးနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့အဲဒါတွေကိုလျစ်လျူရှုဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဤအရာများနှင့်ကြိုးစားရန်ထိုက်တန်သည် ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများသို့မသွားမီ ၎င်းတို့အနက်အချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်အဲဒါကဒါပဲ။ ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းသည် VPN နှင့်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ကွန်ယက်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ငါတို့သွားမယ် "အစ" ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ "Setting".
ထို့နောက်ငါတို့သည်ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ "ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်".
En "အဆင့်မြင့်ကွန်ယက်ဆက်တင်များ" ငါတို့က option ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကွန်ယက်ပြဿနာဖြေရှင်းသူ"
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိုသော adapter ကိုရွေးချယ်ပြီးနှိပ်ပါ "နောက်တစ်ခု".
Firewall သို့မဟုတ် firewall သည် VPN ဆက်သွယ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ အမှန်တော့၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံဆက်သွယ်မှုကိုပင်ပိတ်ပင်နိုင်သည်။ ဒီပတ် ၀ န်းကျင်က firewall ရဲ့ဖယ်ထုတ်စာရင်းထဲကိုဒီကွန်နက်ရှင်ကိုထည့်ဖို့ပါ။
အမြစ်ပြဿနာကိုအဆုံးသတ်ရန်မှာတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြစ်သည် Firewall ကိုပိတ်ထားပါမရ။ သို့သော်ဤအရာသည်အလွန်အကြံပြုထားသောအိုင်ဒီယာမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာကိုအကာအကွယ်မဲ့ပြီးဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ထိတွေ့လိမ့်မည်။ အလယ်အလတ်ဖြေရှင်းချက်သည်၎င်းကိုခဏပိတ်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါတို့သွားမယ် "ထိန်းချုပ်ရာနေရာ" ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် "လုံခြုံရေးစနစ်".
ပြီးရင်ငါတို့ကလစ်ပါ "Windows Defender Firewall" public နှင့် private network နှစ်ခုလုံးအတွက် activate / deactivate ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အခြား VPN ကိုမသုံးထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ
၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဤအမှား၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၌အခြား VPN ထည့်သွင်းထားလျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေများပါသည် ပဋိပက္ခ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယုတ္တိကျသောဖြေရှင်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့မသုံးချင်သော VPN ကိုပိတ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသာသုံးပါ။
Avast SecureLine VPN ကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ
သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေပါ။ အကြိမ်များစွာ software ကိုပြန်လည် install လုပ်ပါ ၎င်းသည်ဤပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အရှင်းဆုံးသောအဖြေဖြစ်သည်။ program ကို uninstall လုပ်ပြီးပြန် install ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အမြဲပိုမိုထိရောက်စေမည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » SecureLine VPN ဆာဗာသည်သင်၏လိုင်စင်ဖိုင်အားငြင်းပယ်လိုက်သည် - ဘာလုပ်ရမလဲ။
TikTok မှာဘယ်လောက်ကျသင့်လဲ။ များစွာသောသြဇာလွှမ်းမိုးသူများက၎င်းကိုထုတ်ဖော်သည်
Windows error 0x800704ec ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ